Impela, wonke umuntu uyazi ukuthi lokhu isigubhu sikagesi. Yena okholwa inani ugesi kudliwe yithi. Lezi amathuluzi yokulinganisa zihlukaniswe ngezigaba ezimbili, kuye ngokuthi yini isikimu ukunikezela ngogesi. Singasebenzisa olulodwa okhombisa (ezimbili-wire) kanye ezintathu okhombisa imitha kagesi. Esikhathini imigqa zokugcina - emithathu wire (akukho umqhubi hlangothi) noma ezine (kukhona umqhubi hlangothi).
isizukulwane okusha - ezintathu isigaba imitha kagesi, esetshenziselwa ukwakha isizinda isici yesimanje futhi okuyinto nekuhambisana ezingeni lamanje lwentuthuko yobuchwepheshe. Lokhu imishini ehlelwe ngendlela, zinjalo, ngaphezu ukuqopha energy ukusetshenziswa, ukunikeza abasebenzisi nge eziningi nemingcele ukuthi anqume izinga ugesi. Le ndlela le ndlela, ngenxa ngokuyinhloko yokuthi abathengi yesimanje ozama ukulondoloza ngangokunokwenzeka, ukunciphisa izindleko kagesi bese metering multi-tariff ikuvumela ukuba wenze konke okusemandleni.
Siyini leso simiso emnothweni, okuyinto kuhlinzekwe yinkampani imitha ezintathu okhombisa ugesi? esiphikisayo Ezivamile sinquma amandla wemali olulodwa usuku lonke nobusuku, ngakho abathengi bakhokha imali engaba sonke isikhathi ukuba esiphezulu. Ngokuphambene, ezintathu okhombisa imitha kagesi ibalwa for esishintshashintshayo ezithile, ngokulandelana, sansuku zonke noma isikhathi sonyaka. Ngenxa yalokho, lapho isikhathi esithile ifika, counter ngokuzenzakalelayo sekuqalile ukuba predetermined count Imodi ngokuvumelana yamanani kwesikhathi.
Ezintathu okhombisa imitha kagesi kuyabiza ngaphezu onobuhle ezivamile. Kodwa intengo ngokushesha okhokhela ngokwayo ngesikhatsi kokuhlinzwa ngenxa eningi izindleko imali. Idatha isilinganiso abonisa ukuthi umphumela kwezomnotho, ngisho ne esiningi ugesi uyakwazi ukufinyelela 60%.
uhlelo Multirate kunenzuzo futhi Ukuphokophelela amandla okuphatha, abanomuzwa wokuthi umthwalo usuku lonke: isiqongo ukusetshenziswa - ekuseni nakusihlwa, kodwa ebusuku kunciphisa ukukhiqizwa energy kukagesi. Ukusebenza kanye nesimo okokusebenza zalimala. Uma esiphezulu amandla ukusetshenziswa, inkampani ekhiqiza Elektroresurs kufanele kwenzeke ukuba buthelela amandla akhe, ugesi uba ezibizayo ngenxa yalokho. Ngakho ngenxa yezizathu zezomnotho, ukusebenzisa ugesi e ezishibhile sikhatsi, kuba nenzuzo kakhulu.
Ezintathu okhombisa imitha kagesi ixhunywe high voltage inethiwekhi usebenzisa transformers voltage zimbili Transformers zamanje. lamakhoyili ohlobo yamanje imitha kagesi kufanele ixhumeke izifunda yesibili yokulinganisa transformers zamanje. I ohlobo uxhumeke kwi-voltage yesibili ka transformer wokulinganisa. Ngokuxhuma kubo phakathi siqala ka ohlobo zamanje Jumpers yangaphakathi isuswe, futhi ikhoyili kuhlanganisiwe kungakhathalekile izifunda zamanje.
Thenga ezintathu okhombisa ugesi amamitha emakethe yasekhaya akunzima. Ngokwesibonelo, imitha ezintathu okhombisa "Mercury" - ngempela kukho ehloniphekile. Zikhona nezinye onobuhle eziningi.
Amadivayisi amakhamera zinhlobo
Jacket zabesilisa: stylish, imfashini, amahle